रोल्पाली सुगम संगीत क्षेत्रका धरोहर इन्द्र पाखे मगर – रोल्पा समाचार
२०७८ श्रावण १८, सोमबार ०६:४८ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७८ श्रावण १८, सोमबार ०६:४८ गते
आधुनिक पप गायकको क्षेत्रमा इन्द्र पाखे मगरको यात्रा निरन्तर चलेको छ । जीवन हरेक चुनौतीसँग संघर्ष गर्दै यात्रारत एउटा संगीत यात्रीको नाम हो इन्द्र पाखेमगर । आधुनिक पप गायक सांगीतिक यात्री इन्द्र पाखे मगर उहाँ रोल्पा नगरपालिका ६ नं. वडा कोटगाउँ (साविक ७ नं. वडा) क्वाङ्गामा २०४१ साल चैत्रको १० गते शनिबारका दिन बुबा दली घर्तीमगर र आम घुमिसरा घर्तीमगरको कोखबाट जन्मिनु भएको थियो । सामान्य किसान परिवारमा जन्मेका पाखे मगरको परिवारमा एक दाई रहचन घर्तीमगर र एक बहिनी आकृति घर्तीमगर हुनुहुन्छ । गायक इन्द्र पाखे मगर भने कान्छा छोरा हुनुहुन्छ । सानै उमेरदेखि चञ्चल स्वभाव भएकोले गीत संगिततिर रुचि राखि गाउँघरमा मादल, बासुरी बजाएर तीज र तिहारमा विभिन्न नाँच गान गरी गराई आफ्नो गाउँमा रमाइलो बनाएर मन्द्र मुख्द बनाउनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नै गाउँमा गठन भएको होमल्याण्ड युवा क्लवका पदाधिकारीहरुलाई नाचगान सिकाई, सांस्कृतिक उत्थानमा मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवसर पाउनुभएको थियो । निरन्तर क्लवको साँस्कृतिक क्षेत्रलाई उत्थान गरेको तथा क्लवको अभिभावक, सांस्कृतिक गुरु भनेर होमल्याण्ड युवा क्लवलले सम्मान पनि गर्दै आएको छ । आफ्नै गाउँमै विद्यालय नभएकोले बाल्यकालमा अध्ययन गर्न कष्ठकर थियो । आफ्नै गाउँको भन्दा पर छिमेकी गाउँ धबाङमा रहेको विद्यालयमा प्राथमिक तहको अध्ययन सकेपछि माध्यमिक तहको अध्ययनका लागि नेपाल माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभयो । उहाँले माध्यमिक विद्यालय कोटगाउँमा अध्ययन गर्दा शुक्रबारे लगायत अन्य दिनमाा आयोजना हुने अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत शुक्रबारे कार्यक्रममा सहभागी भई थुप्रै पुुरस्कार हात पारेको खुशीको क्षण स्मरण समेत गर्नु हुन्छ । त्यही प्रेरणाले अगाडि बढ्न बाटो देखाएको समेत बताउनुहुन्छ । सोही विद्यालयमा हरेक वर्ष वार्षिकोत्सव हुँदा गीत सँगसँगै गाजाबाजा बजाएर विद्यालयलाई संगीतमय बनाउने अवसर पनि विद्यालयले उहाँलाई दिएको थियो । कोटगाउँ स्थित ब्राइट ल्याण्ड युवा क्लवका शेर बहादुर घर्तीसँग सहकार्य गरी ब्राइथ ल्याण्ड युवा क्लवको विविध कार्यक्रममा सहभागी भई सोही क्लवलाई पनि गीत संगीत मार्फत योगदान पु¥याउनुभएको थियो । कलिलै उमेरमा माध्यमिक विद्यालय कोटगाउँबाट एस.एल.सी. परीक्षा दिएपछि परीक्षाको नतिजा बिचमा दश वर्षे युद्व विराम भएर शान्तिकाल अवस्थामा रोल्पामा विकासका लहर आउँदा २०६५ साल वैशाखमा माडीचौरदेखि निम्ररी हुँदै घर्तिगाउँ जोड्ने नयाँ बाटो ट्रयाक समिति मार्फत कोर्चाबाङका पूर्व नेकपा (एमाले) सभापति मान बहादुर बाठा सोही गाउँकै तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेता एमव् हाल माडी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुन, नेकपा (माओवादीक केन्द्र) लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य तथा महिला नेतृ स्वर्गीय हरिसरा घर्तीमगर ‘टिका’ लगायत थुप्रैसँग काम गर्ने उहाँले अवसर पाउनुभयो । यी भावानाले सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न उहाँलाई प्ररेणा समेत दिएको थियो । उहाँलाई आइरेन गेट एस.एल.सी.को नतिजामा उत्तिर्ण भए लगत्तै उच्च शिक्षाको अध्ययनको लागि दाङ घोराही जानुभएको थियो । दाङको बसाईको क्रममा २०६५ साल मंसिरदेखि दाङमा क्षेत्रीय स्तरका सांगितिक प्लेट फम इन्द्रेणी आइडल सिङगिङ कार्यक्रम आयोजना भइरहेका थियो । उहाँले रोल्पा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रथम आइडल भिड्ने कन्टेस्टेन पर्नुभएको थियो । त्यतिबेला नै संगीत क्षेत्रमा उहाँलाई पाउँदा सिङ्गो रोल्पालीलाई गर्वको विषय बनेको थियो । त्यतिबेला आफुलाई पनि निकै खुसी लागेको बताउनुभयो । आइडलमा उहाँको गायन शुरु पनि भयो, पहिलो राउण्ड भोकल परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो । दोस्रो पियानो राउण्ड पनि उत्तिर्ण गर्नुभएको थियो । तृतीय राउण्डदेखि उहाँ प्रतियोगिताबाट बाहिरनुभयो । बाहिदा पनि नयाँ कार्यका लागि एउटा शिक्षा मिलेको बताउँदै उहाँ आइडलबाट बाहिरए पनि निर्णायक मण्डलको भने धेरै प्रशंसा थियो किन भने उहाँमा गीत गाउने क्षमता राम्रो भएको प्रक्रिया दिएका थिए । निर्णायकहरु डाक्टर गोविन्द आचार्य, मथु प्रसाद श्रेष्ठ, रामहरी रिजालले उहाँलाई दुःखका साथ बाबुको भविष्य राम्रो छ । काठमाण्डौं गएर म्युजिक सिक भविष्यमा राम्रो गायक बन्ने छौं भन्दै उहाँलाई सांगीतिक सुझाव दिँदै विदाईको साथै शुभकामना दिनुभएको थियो । उहाँले निर्णायकहरुको सल्लाहलाई सहर्स स्वीकार्दै २०६६ सालतिर काठमाण्डौंमा एभ्रेरेष्ट कल्चर संगीतिक विद्यालयमा संगीत सिक्न भर्ना हुनु भएको थियो । विस्तारै उहाँको सांगितिक यात्रा अगाडि बढेको थियो । त्यतिबेला पाखे मगरलले वरिष्ठ म्युजिसियन स्वर्गीय साङ्रगी बाहक जंगबहादुर गन्र्धव, गितार बादक अनुपदास, तवला बादक भुवन गन्धर्व, रेडियो नेपालका खड्क गर्वुजा हाम्रो रोल्पाली स्रष्टा कृष्ण पुन, राधिका हमाल लगायतका थुप्रै कलाकारहरुसँग भेटघाटले सांगीतिक यात्रालाई फराकिलो बनाएको थियो । यी सफलताका बीचमा पनि तितो अनुभूति कक्षा दशमा अध्ययन गर्दा गर्दै उहाँको बुबाको निधन भएकोले म्युजिक सिक्ने क्रममा काठमाण्डौंमा चामल किन्ने पैसा अभाव भएर दुई रात भोकै बस्दा आर्थिक अभावको महशुुस गर्नुभएको पनि स्मरण गर्नुहुन्छ । निरन्तर प्रयासले तीन वर्ष म्युजिक सिकेर आफ्नै जन्म भूमि रोल्पा फर्किनु भयो । उहाँलाई संगीत सिकेर रोल्पा आउँदा आफ्ना थुप्रै साथी भाइहरुले भेटघाट गरेर स्वागत गर्नुभएको थियो । जिल्लामा साथी भाइहरुसँग छलफल गरी सरगम ग्रुप समूह स्थापना गरी साथीहरुलाई गीत रेकर्ड गर्ने अवसर जुराइदिनु भएको थियो । २०७१ सालमा उहाँले साथीहरुसँग नयाँ गीत एल्बम रेर्कड गरी जिल्लाका राजनीतिक दल, पत्रकार र साहित्यकारको उपस्थितिमा रोल्पा जिल्लाको टुडिखेलमा आधुनिक गीत लोकार्पण गर्नुभएको थियो । निरन्तर गीत संगीतमा सधाना गर्ने पाखेलाई अहिलेको सन्दर्भमा नचिन्ने व्यक्तिहरु सायद कमै होलान् । उहाँको करिव करिव एक दर्जन गीतहरु आफ्नै शब्द संगीतमा देशभक्ति, आधुनिक, पप गीतहरु थुप्रै बजारमा उपलब्ध छन् । पछिल्लो समयमा रोल्पाबाट गायन क्षेत्रमा लोक स्तारको विजेता शनि विश्वकर्मा, जलजला तारा शिव सुनार र द् भ्वाइस अफ नेपालको प्रतिस्पर्धि गनवीर बुढा लगायत रोल्पाका पछिल्ला क्षेत्रका नयाँ स्रष्टाहरुलाई गीत संगीतमा अगाडि बढ्ने सल्लाह सुझाव दिँदै आउनुभएको भएको छ । उहाँ जिल्लामा सांगितिक संस्थामा पनि आवद्व हुनुहुन्छ । रोल्पा जिल्लामा लोक दोहोरी प्रतिस्थान जिल्ला शाखा स्थापनामा समेत उहाँले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको थियो । न्यू रोहित कलामा पूर्व संगीत प्रशिक्षक, लोक दोहोरी प्रतिष्ठान जिल्ला शाखा रोल्पाका पूर्व सचिव, नेपाल सांस्कृतिकका पूर्व कोषाध्यक्ष र सुनछहरी कला केन्द्रका सल्लाहकारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको थियो । यति मात्रै होइन सांगीतिक क्षेत्रसँगै सामाजिक सेवाको पुण्य काममा पनि पाइला चाल्नुभएको छ । पछिल्लो समयमा रोल्पा जिल्लाका आर्थिक विपन्न विरामीहरुको उपचार्थ आर्थिक संकलन अभियान चलाएर समाजिक अभियानबाट सञ्चो बनाउनु भएको थियो ।
सांगतिक क्षेत्रका एक धरोहर इन्द्र पाखेमगर जो सामान्य किसान परिवारमा जन्मेर निरन्तर संगीत क्षेत्रमा साधान गर्नुभयो । कलाकारीता पेशा र सँगै समाज सेवालाई पनि अगाडि बढाउनुभएको पाखेको जीवनको लक्ष्य संगीत र समाज सेवा भएको रोल्पा समाचारसँग बताउनुभयो ।
एउटा साधा जीवन उच्च विचारको उदाहरणीय पात्र सांगीतिक यात्रामा लाग्ने एक यात्री रोल्पाबाट पाउँदा हामी सबैलाई खुसीको विषय नै हो । उहाँ सांगितिक क्षेत्रमा मात्र होइन कि सामाजिक क्षेत्रमा पनि थुप्रै काम गरी योगदान पु¥याउनु भएको छ । उहाँको आगामी सांगितिक क्षेत्रसँगै उहाँको जीवन सुखमय रहोस् आम रोल्पालाई संगीतको क्षेत्रबाट देश र विश्वमा चिनाउनु हुनेछ । भनिन्छ मानिसको भौतिक शरिर भन्दा कला र गला सधै जीवित हुन्छ यो युगौँ युगसम्म वाँची रहनेछ । यही शुभकामना ।
प्रस्तोताः मानसिंह विश्वकर्मा (सम्पादक)
शहीद मार्ग सुधार संघर्ष समितिद्वारा २४ गते यायाताय बन्द घोषणा फागुन २२ गते शहीम मार्ग सुधार संघर्ष समिति रोल्पाको अध्यक्ष नन्दराम...
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७८ जेष्ठ १४, शुक्रबार १२:५४ गते २०७८ जेष्ठ १४, शुक्रबार १३:०७ गते
रोल्पा समाचारदाता१४ जेठ लिबाङ कोरोनाको दोस्रो चरणको लहर नेपालमा तीव्र रुपमा फैलिएको बेला नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष एवं...